Korona vayirisii: Lammii Jaappaan sadiifi lammi Itiiyoophiyaa tokkootu biyyitti keessatti qabame. – Rabira News
Itoophiyaa keessatti namoonni 3 dabalataan vaayirasii koronaan qabamuu isaanii Instituyitiin fayyaa Itoophiyaa beeksiseera.
Namoonni kuneen nama lammii Jaappan kanaan dura Itoophiyaa keessatti vaayirasichi irratti argamee waliin walitti dhufaan keessatti argamu.
Namoonni vaayirasichi irratti argamee 3’n kunis lama lammii jaappaan yoo ta’an tokko immoo lammii Itoophiyaati.
Waluma galatii lammii Jaappaan sadiifi lammi Itiiyoophiyaa tokkootu biyyitti keessatti qabame.